ट्वीक्स: एक व्यापक ढाँचामा सर्दै | Martech Zone
सोमबार, सेप्टेम्बर 4, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
भ्याकुभरमा मेरो साथीको लागि मैले यस साताको अन्त्यमा दुई जोडी साइटहरूमा काम गरिरहेको छु। त्यसो गर्दा, मैले केहि तथ्या .्कहरूमा गहिरो नजर लिएँ र वेबमा केही डिजाइन साइटहरू देखें। मैले यसलाई पढ्न सजिलो बनाउनको लागि मेरो लेआउट चौडा गर्ने निर्णय गरें। म यसमा एक सर्वेक्षण दिन लागिरहेको छु - मलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईलाई यो मनपर्दछ वा घृणा गर्नुहुन्छ भने। म मेरो आगन्तुकहरु लाई ब्रश गर्न चाहन्न जुन x०० x 800०० वा सो भन्दा कम चलिरहेका छन्, तर ती केवल मेरा आगन्तुकहरु मध्ये।% छ। नतिजाको रूपमा, मलाई लाग्दैन कि यो मेरो पाठकहरूको मुख्य समूह हो।
जब म अन्य ग्राहकहरूको साइटहरूमा काम गर्न जारी राख्छु, म उनीहरूको श्रोताको आधारमा यी नयाँ चौडाइहरूसँग काम गर्न जाँदैछु। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ!
जनवरी 13, 2007 मा 1: 12 एएम
मैले तपाईंको पुरानो लेआउट देखिन, तर मलाई यसको मन पर्थ्यो एनाकोंडा विषयवस्तुको साथ। फन्ट आँखामा पनि धेरै सजिलो छ… .यो पूर्वनिर्धारित anaconda फन्ट हो?
त्यसो भए, 'फराकिलो' कत्तिको फराकिलो छ? म मेरो ब्लग मा धेरै फोटो प्रकाशित र 480px चौड़ा अब सानो देखिन्छ!